मन, ममता र मेरी आमा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मन, ममता र मेरी आमा
२०७१ बैशाख १५, सोमबार ०१:१० गते
वैशाख कृष्णपक्षको दिनलाई आमाको मुख हेर्ने दिनका रुपमा मनाइँदै आइएको छ । यसै दिन आमालाई मीठो खुवाउने तथा नयाँनयाँ कपडा किनिदिने चलन पनि छ । टाढा रहेका छोराछोरी पनि यस दिन आमाको मुख हेर्न भनी आमालाई भेट्न जाने गर्दछन् । तर, आमा नहुनेहरुले भने यस दिन स्नान गरी आमालाई सम्झने, आमाको फोटोमा माला लगाउने अनि मातातीर्थमा भेला भई भगवान् शिव र विष्णुको पूजा गर्ने चलन छ । नौ–दस महिनासम्म शिशुलाई गर्भमा राखेर जन्म दिने र जन्मिसकेपछि शिशुलाई स्याहारसुसार गरी संस्कार सिकाउने आमाको मह¤व यही एक दिनमात्र होइन, वर्षदिनका सबै दिन उत्तिकै हुनुपर्ने हो, तर आजभोलि धेरै ठाउँमा यस्तो भएको पाइँदैन । आमाको मह¤व दर्शाउन कुनै तिथि र मिति कुर्नुपर्ने आवश्यकता होइन । आमा हुनेहरुले आमाको मुख हेर्नलाई र आमा नहुनेहरुले आमालाई सम्झन खास दिन वा पर्व कुर्ने यो एउटा फेसन मात्र हो ।
आमालाई एक छाक खान दिने, मीठो खानेकुरा वा राम्रो कपडाभन्दा आमासँग बोलिने मीठो बोली मह¤वपूर्ण हुन्छ । वर्षभरिका प्रायः दिन आमासँग बोल्न पनि समय नहुने छोराछोरीहरुले वर्षमा एक दिन दिने मीठो र राम्रो कुराले के मह¤व राख्ला र ? सबै आमाहरु उस्तै हुन् र उनीहरुका चाहना पनि उस्तै हुन्छन् । प्रायः सबै आमालाई आप्mना सन्तानहरुले गर्ने प्रगति नै सबैभन्दा ठूलो उपहार हो । आप्mना सन्तान भेट हुँदा मीठो गरी बोलिएको बोलि मात्र पनि आमाका लागि औषधिबराबर हुने गर्छ । आमा हुनेहरु र आमा नहुनेहरुले बुभ्mने आमाको मह¤वमा फरक छ । एउटी आमाले आप्mना सन्तानका लागि जति गरेकी हुन्छिन्, त्यसको बदलामा आमालाई दिने कुरा सन्तानसँग केही पनि हुँदैन । आमाले एउटा सन्तानलाई लगाएको ऋण चुक्ता गर्ने एउटा मात्र तरिका भनेकै आमाप्रति दर्शाउने स्नेह, सद्भाव र सम्मान हो । हामीलाई केही कुरामा अप्ठ्यारो पर्दा समेत हामी सबैभन्दा पहिला आमालाई नै सम्झन्छौँ । आमाबाट पाएको संरक्षण नै हामीले आमालाई प्रत्येक समस्यामा सम्झनुको कारण हो । एउटा आमाले आप्mनो सन्तानलाई गर्ने जस्तो माया अरु कसैबाट पनि सम्भव हुँदैन ।
वैशाख कृष्णपक्षको दिन हरेक सन्तानले आमाको मुख हेर्ने दिन हो, थाहा छ तर के गर्नु ! आफूलाई आमाको अनुहारको सम्झना पनि बाँकी छैन । आमा नहुनेहरु जहाँ भेला भए पनि आमाको अभावमा कमी महसुस हुनै सक्दैन । आफ्नी आमा नहुने कुनै पनि सन्तानले अरु कसैलाई आमा मानेर औपचारिकता पूरा गर्न त सक्लान्, तर आमाको मायालाई बिर्सन भने कसैले पनि सक्दैन । अरु कुराको अभावमा हुने पीडा र आमाको अभावमा हुने पीडामा सायद फरक छ होला । एउटा सन्तानप्रति आमाको माया कति धेरै हुन्छ, म त्यो अनुमान लगाउन मात्र सक्छु । आमासँग सानैदेखि कहिल्यै पनि सँगै हुन पाइनँ । कहिलेकाहीँ बिदा हुँदा घर गएर आमालाई भेट्छु भन्ने दिन कहिल्यै नआएकोमा दिक्क लाग्छ ।
आमा गुमाउँदाको दिन अमिलो बनेको मन आजपर्यन्त पनि स्थिर रुपमा कायम नै छ । सानै हुँदाको एक दिन स्कुलबाट घर पुग्नेबित्तिकै जे देखेको थिएँ, त्यसले ल्याउने सबै परिणमप्रति म बेजानकार नै रहेछु, त्यो समयमा । रात पर्न आँटिसकेको थियो । घरदेखि रेवा खोलाको तीरमा पुग्दासम्म मेरो आँखाबाट आँशु बग्न रोकिएका थिएनन्, त्यसदिन । आप्mनै आँखा अगाडि मुढा राखेर आमालाई पोलेको त्यो दिन अगाडिसम्म मलाई पनि आमाको मह¤व के हो, थाहा थिएन । त्यसपछि बिस्तारै–बिस्तारै समयको क्रमसँगै आमाको अभाव तीव्र गतिमा खड्किन थाल्यो । आमाको अभावबीचबाट हुर्कंदै गर्दा आमाको मह¤व बढ्दै गयो र प्रत्येक पलमा आमालाई नै सम्झन थालेँ । जति–जति दुःख आइपथ्र्यो, त्यति–त्यति आमाको अभाव अझ धेरै खड्किन थाल्थ्यो । मलाई आमाले छाडेर गएपछिको बाध्यता नै यही थियो ।
बालकमै आमा गुमाउनुपर्दा आमाको मह¤व बढेर गएको हो भने फरक कुरा होइन यदि भने आमालाई वर्षका एक दिन गुलियो चखाएर बाँकी दिन भोकै राख्नेहरु पनि मैले देखेको छु । त्यस्ता सन्तानहरुप्रति मेरो घोर खेद छ । आमाको अनुहार धमिलो रुपमा सम्झनामा आउँदा छाती पोल्छ । धेरै साथीहरुले उनका आमालाई गरेको व्यवहार देखेर धिक्कार्छु । अनि सम्झन्छु, मलाई आमाको अभावमा कति दुःख भयो भनेर । तिनीहरुलाई के थाहा, आमा नभएको भए तिनले पनि मैले जस्तै दुःख पाउनुपथ्र्यो भनेर । आमा नहुनेहरुले भोग्नुपर्ने दुःख धेरैको कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको हुन्छ । आमा नहुने सन्तानका कति छाक खाएर टर्छ र कति छाक अरुले खाएको हेरेर टर्छ, त्यो कुरा मैले राम्रैसँग भोगेको छु । मागेर खाने आँट नहुँदा कति छाक भोकै पनि बसेको छु । यो सबै हुनुको एकमात्र कारण नै आमा नहुनु हो । घरमा आमाबाबु छैनन्, लगाउने खानेकुराको माग पनि कोसँग गर्नु ! घरबजारको बीचमा थियो तल्ला र माथिल्ला बस्तीबाट आउने साथीहरु आमाको हात समात्दै बजार डुलेको देख्थेँ । त्यस कुराले दिएको चोट पनि पछिसम्म गहिरो रुपमा रहिरह्यो । सायद, आमाले मसँग धीत मर्ने गरी कुराकानी पनि कहिल्यै गर्नुभएन, किनभने म दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने र कुराको सिलसिला बुभ्mने उमेरको नहुँदै आमाले यो संसारबाट बिदा लिनुभयो । आमाको आत्मबल कति उच्च थियो भन्ने कुराको म कल्पना मात्र गर्न सक्छु । मेरी आमा र सायद सबै आमाहरु उस्तै–उस्तै नै हुन् । आमाको मनको उपज हुनुपर्छ सायद, आफूले नखाएर भए पनि हामीलाई मात्र खुवाएको पनि म अलिअलि सम्झन्छु । संसारका कुनै पनि आमाहरु गरिब सोचको भएको मैले आजसम्म देखेको छैन ।
मलाई इन्जिनियर बनाउने आमाको पहिलादेखिकै धोको थियो । यस्तो मन लिएर आमा लामो समयसम्म जीवित रहन सक्नुभएन । जीवित नै हुनुभएको भए आमा कति खुशी बन्नुहुने थियो होला यतिखेर । आमाको मन न हो, आप्mना सन्तान नराम्रो होस् त कसैले पनि भन्दैन, तर सबै सन्तान आमाले सोचेजस्तै पनि बन्न सकेका छैनन् । सम्झेर दुःख मान्नुपर्ने कुनै घटनाको याद छैन । आमाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, सायद धेरै दिन माया गर्न लेखेको रहेनछ । सबै आमाहरुको मन उस्तै अनि सन्तानप्रतिको माया उस्तै हो । फरक यत्ति हो, कसैले त्यो माया लामो समयसम्म पाइराख्ने सौभाग्य पाउँछन् भने कसैले छोटो अनुभवमा नै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा धेरै मानिसहरु आमाको मायासँग टाढा भएको देख्छु । आमाप्रतिको श्रद्धामा कमी आएको पनि देखेको छु । सायद, कुनै पनि वस्तु नगुमेसम्म त्यसको मह¤व थाहा नहुने भएकाले नै हुनुपर्छ, जीवित आमाहरुको मह¤व सन्तानहरुका लागि घट्दै जान थालेको छ । खै किन हो, मलाई अहिले पनि आमाको उत्तिकै अभाव खड्किरहेको हुन्छ । मेरा प्रत्येक विजय वा प्रगतिहरु पनि आमाकै सम्झनामा खल्ला बन्ने गर्छन् । आमाको अभावमा अहिले पनि धेरै सन्तान सडकमा जिउन बाध्य छन् । धेरै सन्तान कुलतमा फस्न बाध्य भएका छन् । आमा हुनु र नहुनुमा एउटा सन्तानको भविष्य कस्तो बन्ने भन्ने कुरा सघन रुपमा जोडिएको हुँदोरहेछ । आमाको मायामा रहेर एउटा सन्तानले गर्न सक्ने बराबरको प्रगति आमा नभएको सन्तानले गर्न
त सक्ला, तर धेरै कठिन भने अवश्य हुनेछ ।